मृत मोतिरामलाई व्युँताउने भन्दै पास्टरले शव लुकाए – Sanchar Patrika
मृत मोतिरामलाई व्युँताउने भन्दै पास्टरले शव लुकाए
August 4, 2020 194
टीकापुर : कैलालीको टीकापुरका एक जना क्रिश्चियन धर्मगुरु (पास्टर) ले शव जिउँदो बनाइदिने भन्दै पाँच दिनदेखि आफ्नो घरभित्र राखेको खुलेको छ। कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-१ का मोतिराम डगौराको शव पास्टर दिपक चौधरीले पाँच दिनदेखि आफ्नो घरभित्र राखेका हुन्।
स्थानीयले घरभित्र शव कुहिएर गन्ह्राउन थालेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरको टोलीले प्लाष्टिकमा डसना र तकियामा सुताई राखेको अवस्थामा शव फेला पारेको हो। ईप्रका टीकापुरका प्रहरी नायव उपरिक्षक मधुसुदन न्यौपानेले पास्टर चौधरीले जिउँदो बनाइदिने भन्दै शव घरभित्रै राखेको खबर आएपछि शव बरामद गरेको बताए।
घटना विवरण अनुसार टीकापुर नगरपालिका-१ का मोतिराम डंगौरा मुटुका विरामी थिए। उनका छोरा ईश्वर डंगौराले उनको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा उपचार गराए। तर चिकित्सकहरुले निको नहुने भन्दै घरमा आराम गर्न घर पठाए। तर डगौराको पास्टर दिपक चौधरीले मुटुको रोग पनि निको पारिदिने भन्दै उपचार सुरु गरे।
पाँच दिनअघि पास्टरको घरमा पुर्‍याएका विरामी मोतिरामको सोही दिन मृत्यु भईसकेको छिमेकीहरुले बताएका छन्। तर पास्टरले सात दिनमा मोतिरामलाई जिउँदो बनाई दिने भन्दै शव आफ्नै घरमा राखेको मृतकका छोरा ईश्वरले प्रहरीलाई प्रारम्भीक बयानमा बताएका छन। टीकापुरको सुकुम्बासी बस्ती रहेको शक्तिनगर शिविरका ईश्वर हरेक दिन बुवाको शव जिउदो भयो की भनेर हेर्न जाने गरेको पनि खुलेको छ।
छिमेकीले शव गन्हाएको खबर दिएपछि प्रहरी पुग्दा घटना बाहिरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका डिएसपी मधुसुदन न्यौपानेले घरभित्रै ४३ वर्षका मोतिरामको शव भेटिएको र चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए। प्रहरीका अनुसार मृतकको शव सडेको अवस्थामा भेटिएको छ।
प्रहरीले शव पोष्टमार्टमको लागि टीकापुर अस्पतालमा पुर्‍याएको छ। डिएसपी न्यौपानेले घटनाका बारेमा सोधपुछ गर्न मृतकका छोरासहित स्थानीय चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए। स्थानीय शिक्षक प्रेमलाल चौधरीले पाँच दिनदेखि मृतकका छोराले बुवालाई उपचार भइरहेको बताउने गरेको जानकारी दिए। चौधरीका अनुसार टीकापुर नगरपालिकाको-१ मा ६ वटा सुकुम्बासी शिविरहरु रहेका छन्।
Prevभदौ १५ मा विद्यालय नखुले पाठ्यक्रम पूरा हुँदैन, भर्चुअल कक्षाको भर छैन
Nextकस कसलाई पर्ने भयो नराम्रो असर ? मुना को दरिलो प्रहार ! कानुन फितलो भयो भनी हामी नारि छोड्दैनौ ! (भिडियो सहित)
रुसले कोरोना भ्याक्सिन विदेश पठाउन थाल्यो, पहिलो चरणमा ५ करोड डोज पठाउँदै